Taorian’ny 25 taona, Nahatsapa Ho Niaina Tao Anatin’ny Demôkrasia Ihany Ve Nony Farany Ry Zareo Hongroa? · Global Voices teny Malagasy
Taorian'ny 25 taona, Nahatsapa Ho Niaina Tao Anatin'ny Demôkrasia Ihany Ve Nony Farany Ry Zareo Hongroa?
Voadika ny 26 Novambra 2014 16:54 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, srpski, polski, Français, Deutsch, English
Fihetsiketsehana tany Bodapest, Oktobra 2014. Sary avy tamin'i Marietta Le.
Mpamoaka lahatsoratry ny Global Voices Hongroa sady mpikambana ao amin'ny mpitantana ny Atlatszo, Fikambanana Tsy Miankina Amin'ny Fanjakana any Bodapesta lohany amin'ny fangaraharàna, i Marietta Le..
Miaraka amin'ny tantara eo amin'ny pejy voalohan'ny New York Times, ary roa minitra fihomehezana niaraka tamin'i John Oliver, tafiditra tao amin'ny lazan'ny mediam-bahoaka i Hongria, noho ny tetikasan'ny governemanta Hongroa mba hametraka haba manokana ho an'ny seraseran'ny Aterineto.
Mirehareha foana ireo Hongroa isaky mahita ny fireneny bitika resahan'ny fandrakofam-baovaoa maneran-tany, na ahoana na ahoana ny vokatr'izany amin'izy ireo. Avy an amin'ny bozaka maloky ny haivarotra, toa aleon'izy ireo mieritreritra hoe resahana amin'ny ratsy toy izay tsy misy mihitsy. Mampiseho tsara ny andrasan'izy ireo amin'ny zavatra mety ho fantatry ny olona maneran-tany izany, na ny mety tiany ho fantatra, momba ny fireneny..
Tsy vaovao mihitsy ny nahatonga an'i Hongria ho lasa ‘Firenena tsy malalaka’
Ho an'ny olona sasany dia tsy zava-baovao ilay hevitra hoe i Hongria, firenena an'ny Eorôpa Afovoany, izay nanjohy ny ilany tandrefana demôkratika ny taona 1989 (ary 25 taona katroka izay no nirodana ny rindrin'i Berlin), dia manana hevitra ny ho lasa ‘firenena tsy malalaka’, ary ny Praiminisitrany mamaritra ireo firenena tena tsy refesi-mandidy na eo ho eo ihany ho toy ny ohatra ho arahan'ireo vahoakany. Fa raha tsy olona adalan'ny fahalalahana, miady ho an'ny fahalalahan'ireo olon-tsotra ianao, any amin'ny firenena rehetra izay tataovan-drahona ny fahalalahana amin'ny fomba fijerinao azy, dia mety tsy ho fantatrao fa efa ela talohan'ireo herinandro maromaro farany teo ireo no nanomboka ny fianjeran'ity demôkrasia vao teraka ity.
Tamin'ny taona 2010, nahatongavan'ny governemanta ankehitriny teo amin'ny fitondrana , iray amin'ireo asa nataony voalohany ny nanova ny lalam-panorenana sy ny Media Act. Any Hongria, raha mahazo ny vato be indrindra, ny roa ampahatelon'ireo fifidianana solombavambahoaka ny antokonao, tsy mila miasa saina ny handresy lahatra ireo mpikambana ao amin'ny antoko mpanohitra ny hifidy ny tolokevitrao ianao any amin'ny Parlemanta. Afaka mandany izay lalàna tianao ianao.
Nomen'ireo olom-pirenena fotoam-piasàna ny governemanta ho afaka hanova ireo lalàna — izany no lazain'ilay mpikambana ao amin'ny antoko Fidesz eo amin'ny fitondrana ankehitriny, ary marina izany, araka ny lazain'ireo namako mpandrafitra rindrankajy, tsy niteny na inona na inona ireo vahoaka rehefa mikasika ny lalam-panorenana iray vaovao no resaka, lalàna vaovaon'ny Media, na ny famindràna vola avy ao amin'ny kitapom-bola tsy miankina mankany amin'ny kitapom-bola fisotroan-drononom-panjakana. Tsy sadaikatra akory izy ireo amin'ny tranga miseho amin'ny fotoana iray ka hoe misy olona an'aliny mifamory eo amin'ny làlana ary mikiakiaka eo amin'ny fasan'ny demôkrasia, amin'ny anarana hoe “Iray Tapitrisa ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety any Hongria”
Ny taona 2010 na ny taona 2012, tsy nisy nahalala hoe mety hovain'ny governemanta ny lalànan'ny fifidianana mba hanamora ny fiverenany hahazo ny roa ampahatelon'ny maro an'isa ny taona 2014. Tsy nisy nahalala fa hanao famoretana ireo tetikasan'ny Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana (ONG) izay efa an-dàlana, tohanan'ny Norway Grant ara-bola io, tetikasa natao hanampiana ireo firenena tsy mandroso loatra ao amin'ny Vondrona Eorôpeana.
Miaina any amin'ny firenena iray ve ianao, hoe matahotra mafy ireo mpikatroka mafàna fo rehefa mahita fiaranà mpitandro filaminana manoloana ny biraony? Toy izany ireo Hongroa.
Vao lany tamin'ny fitondrany faharoa ny governemanta Fidesz mitondra ankehitriny, nanomboka nanao fanadihadiana ny fandanian'ireo ONG izay nahazo famatsiam-bolan'ny Norvège Grant ny Birao Mpanaramason'ny Governemanta (birao fanamarinana an'ny Fanjakana). Nanaovan'ny polisy bemidina ny biraon'ny Ökotárs, fikambanana iray mpamatsy ara-bola, hikarohana porofo ny lazaina fa fisian'ny fanodikodinam-bola ary fanomezam-bola tsy ara-dalàna an'ireo ONG. Natao ny vakiraokan'ny lisitr'ireo fikambanana mampisy olana. ONG miisa telo ambinifolo, izay mifantoka manokana amin'ny ady amin'ny kolikoly sy mikatsaka ny demôkrasia, no napetraka ho araha-maso akaiky noho ny asa ataony.
Indray Alatsinainy maraina no nitrangan'ny bemidina nanjo ny Ökotárs. Andro vitsivitsy taorian'izay, nitsidika an'i Hongria ilay filoha fahiny tao amin'ny Kaomisiôna Eorôpeana José Manuel Barroso, ary nahazo mariboninahitra “docteur honoris” avy tamin'ny Anjerimanontolon'i Corvinus. Nodidinin'ireo mpitandro filaminana nalefa tany an-toerana mba hiaro ilay vahiny miavaka ny iray amin'ireo ONG “tao anaty lisitra”, izay nifanila birao tamin'ilay Anjerimanontolo. Nanomboka nandeha niparitaka ny imailaka momba ny fanampenam-bava iray vaovao, ankehitriny tao aminà fikambanana iray voatohana ara-bola. Ora vitsivitsy taorian'izay, nahazo imailaka avy tamin'ny mpiasa iray aminà ONG nahazo fampitahorana izahay. Nitomany izy rehefa nandeha nody taorian'ny nandaniany ora maro niaretany tahotra ny ho tongavan'ny mpitandro ny filaminana ao amin'ny biraony. Nanao sarinà fo ho azy ny zanany vavy ary nosoratany toy izao ny tao anatin'ilay sary “tsy hilaozan'ny hafaliana mandrakizay”.
“Sambany no tsy hoe mpikatroka nentanin-kafanam-po irery no nanao hetsi-panoherana”
Amin'ny maha mpiasan'ny ONG ahy, matahotra foana aho hoe lasa leo anay mampaneno ny anjomara fanairana matetika e amin'ny fasan'ny demôkrasia Hongroa ny olom-pirenena. Fa nanova ny fijerin'ireo vahoaka ny amin'ny zavatra nataon'ny governemanta nandritra ny taona maro izay, ilay haba amin'ny seraseran'ny Aterineto, “netadó” amin'ny teny Hongroa. Sambany no tsy hoe mpikatroka nentanin-kafanam-po irery no nanao hetsi-panoherana. Samy nandeha teny amin'ny làlan'i Bodapesta avokoa na ny tanora na ny lehibe, nitazona “memes” (kisary maneso) natao tànana. Nihira hira mikasika ireo lohamilina, Twitter ary Facebook ny vahoaka. Nanao sarontavan'i Guy Fawkes izy ireo, na dia voararan'ny lalàna aza izany. Nony farany ilay izy, toa ny taranaka vaovao no nahatsapa fa tokony hitsangana hiaro ny zony izy ireo. Tsy niendrika zavatra hafa intsony ilay izy — afaka hitan'ny vahoaka amin'izay nony farany fa hoe misy tiany hahatongavana daholo ireo fepetra noraisin'ny governemanta rehetra: ny fakàna am-pitaka ny fahefam-panjakana.
Mbola misy ireo maro, mieritreritra fa “vaovao tsy marina” fotsiny ilay tolokevitra hanasiana haba amin'ny Aterineto — miparitaka ny loharanom-baovao diso mba hanariana dia ireo vahoaka tsy ho amin'ireo tranga tena manan-danja. Fomba fanao izay tadidintsika avy tany amin'ny vanim-potoana talohan'ny 1989 io. Mampatahotra ny mieritreritra fa 25 taona lasa monja izay no nianjera ny rindrin'i Berlin. Tafiditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny tantaran'i Hongria isika, izay tarigetran'ny governemanta ny mametra ireo zon'ny olom-pirenena, toy ny nataony hatrizay, ary ankehitriny aza tena hita mibaribary sy mazava be fa ho an'ny tombotsoany samirery.
Firenena malalaka, Aterineto malalaka
Nanapa-kevitra ny hampihantona ilay haba amin'ny Aterineto aloha hatreto ny praiminisitra, taorian'ilay hetsi-panoherana faharoa, raha nifamory teny amin'ny làlan'i Bodapesta ny olona an'aliny, tsy nihiaka fotsiny hoe “Firenena Malalaka, Aterineto Malalaka” sy hoe tokony hametra-pialana izy, fa koa hoe tsy handoa haba amin'ny fanjakana feno kolikoly izy ireo. Nanazava ny Praiminisitra fa tsy vaovao io haba momba ny Aterineto io, fa fanitàrana fotsiny ireo haba manokana efa teo, nampiharina tamin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra. Na dia nangingina aza ilay resaka haba amin'ny Aterineto teo aloha kely teo, mbola azontsika andrandraina ny hisian'ny “Fakàn-kevitra Nasionaly” momba azy iny amin'ny Janoary.
Mety ho leo miaina ao anatinà demôkrasia tanora ratsy tantana ny olona, fa tsy ho azo entina hankany amin'ny hevi-diso mandrakizay kosa izy ireo. Mino aho fa nahafantatra ny zavatra niseho hatrany ireo Hongroa, fa be zavatra noeritreretina fotsiny izy ireo, nila nifantoka tsara tamin'ny fomba hahatratrarany ny faran'ny volana (fivelomana). Mety hoe nanova tanteraka ny fahadisoam-panantenan'ireo olom-pirenena ilay haba amin'ny Aterineto, ka tafaraka tamin'ny zavatra rehetra eo amin'ny firenena ary nampitroatra azy ireo handray fepetra, nanery azy ireo hitsangana nony farany hanohitra ny kolikoly.
Ny Alahady, nanao famoriam-bahoaka ireo Hongroa, nangataka ny hialan'ny Filohan'ny Fitantanana ny Haba. Tao anatin'ireo nandray fitenenana i András Horváth, ilay “Snowden Hongroa”, izay vao iray taona lasa izay no namoaka antontan-taratasy manamarina fa mahita fanalàna tsiny ny tambajotran'ireo orinasa tafiditra ao anatin'ny fanaovana hosoka amin'ny haba foana ny Fitantanana ny Haba, ary “tafiditra ao amin'io rafitra io” ny kolikoly. Nampitroatra olona vitsivitsy fotsiny ilay fanaborahana, olona an-jatony monja no nampiseho izany.
Fa amin'izao fandraràn'ny governemanta Amerikana ny sasantsasany amin'ireo mpiasam-panjakana Hongroa tsy afaka mankany Amerika izao, fantatray fa na dia zareo aza manana loharanom-baovao mikasika ny kolikoly avo lenta mitranga ao amin'ny firenentsika. Zsolt Várady, ilay mpamorona ny tambajotra sosialy Hongroa voalohany indrindra, izay lehibe noho Facebook tamin'izany fotoana izany, dia nilaza fa hanao tambajotra sosialy iray vaovao ho an'ny olona izay te-hanova zavatra any Hongria izy. Nilaza izy fa mila manova ny fomba fisainany ireo olom-pirenena Hongroa mba hanova ny fisainan'ireo mpanao politika mitondra .
Ary tsy resaka kolikoly avo lenta fotsiny no nipoitra an-databatra. Nandroso hevitra ny hanovana matetika ny fomba fakàna haba any Hongria ireo nandray fitenenana nandritra ny hetsika ny Alahady. Noresahana sahala amin'ny “fanatanjahan-tena nasionaly” ny fandosirana fandoavana hetra, fa ankehitriny, na ireo olon-tsotra aza toa lasa mitaky fiovàm-pamindra. Niantso ny vahoaka ireo nandray ny fitenenana mba hanomboka hifampiresaka amin'ny mpifanolo-bodirindrina ireo olana amin'ny resaka kolikoly madinika. Nilaza tamin'izy ireo mba hitsidika ny biraon'ny Fitantanana ny Hetra ary hanontany ireo mpiasa birao ao raha efa nametra-pialàna ny filohan'ny Fitantanana ny Hetra.
Ho famintinana, mamerina fotsiny ny tenin'i Zoltan Békési aho, Hongroa mpanakanto ary mpandraharaha . Efa 25 taona izay no nilalaovantsika ny resaka demôkrasia. Fotoana tokony hanombohana hijerena tsara azy io amim-pahamatorana izao.